Ukuthenga Impahla kwi-Russia - Njani Ukuthenga Indlu kwi-Russia - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Russia! Oyena lawyer portal.
Ukuba ufuna musa kufumana i-imeyili apha ngaphakathi imizuzu eli, nceda ukhangele spam ulawulo okanye uqhagamshelane nathi kuba uncedoUmthetho kwi- azisa inkqubo yokufunda phezulu ka-real estate ukuba iinqwelo-mali.
Ilizwe Ikhowudi ka- ivumela private umnini mhlaba kwaye iimpawu, kunye yi-abahlali kwaye foreigners.
Phambi kokuba Ilizwe Ikhowudi, ilizwe ubunini akazange efanayo njengoko ilungelo sebenzisa (property). Oku umahluko phakathi ubunini kwaye unelungelo sebenzisa impeded i-mpuluswa uphuhliso lomgaqo-Russian ipropati kwimakethi. Ilizwe Ikhowudi esihlangeneyo ilizwe ubunini kwaye unelungelo sebenzisa.
Nangona kunjalo, kukho eminye imizekelo apho umthetho ayikho isetyenziswe religiously kwaye foreigners isenako hayi ukugqobhoza i-Moscow ilizwe kwimakethi.
Ekubeni esikhethiweyo i-apartment, umthengi ngokunjalo nomthengisi bafanele ukubonisa ulindeleke ukuba ikhona amaxwebhu eziqulatho formalizing i-ziyathengiswa intengiselwano ezifana passports bonke abathathi-nxaxheba, apartment isihloko amaxwebhu, Engaselunxwemeni Ubhaliso-Ofisi Amalungelo kwi-Real Estate ingxelo malunga kubekho kwezixhobo zokusebenza ngomhla ipropati ukulahlwa, floor, isicwangciso, psychiatry kwaye neurology ziko ezinxulumeneyo kwaye izikhumbuzo kuba bonke abathabatha inxaxheba. Umthengi nomthengisi bafanele ukubonisa ke phumeza a esa kundoqo sivumelwano, apho lichaza zonke iimeko elizayo yaba, kwaye sichaza uluhlu kuyimfuneko amaxwebhu ukuba kubonelelwa yi-nomthengisi bafanele ukubonisa. Umthengi efakwa ebhankini ngokupheleleyo imali yokuthenga isixa-mali ngendlela ekhuselekileyo idiphozithi ibhokisi kwi imeko ukuba bank iya ukhuphe imali nomthengisi bafanele ukubonisa kuphela phezu ntetho ye-zalisa impahla ka-ebhalisiweyo amaxwebhu phantsi umthengi ke igama. Abalawuli ezithunyelwayo ezicingelwa riskier njengoko kuthelekiswa imali purchases ukusukela escrow ii-akhawunti ingaba kulungile-esekwe kwi-Us. Emva kwentlawulo, omabini amaqela kuqhubeka atyikitye ziyathengiswa-thenga isivumelwano kwi-phambili realtor okanye notary. I-esayiniweyo isivumelwano ithumele kuba urhulumente ubhaliso, emva kokuba ukuthelekisa unikezelo ubunini ilungelo ngomatshini. I-Ukwamkeleka Umthetho iimfuno ekufuneka usetyenzisiwe yi-omabini amaqela kwi-umhla unikezelo-propati, eqinisekisa ukuba ipropati usesinye transferred ukuba umthengi kwi-i-owamkelekileyo imeko. Kukho malunga nama-a-US$ imali ukuba hire umntu ukuba ifayili yakho yobhaliso paperwork.
Umjikelo uhambo intengiselwano iindleko ziquka zonke iindleko ukuthenga kwaye ke re-uthengisa a ipropati - abaqondisi-mthetho' imirhumo, notaries' imirhumo, iintlawulo zobhaliso, iirhafu, agents' imirhumo, njalo-njalo.
Real Estate Iarhente ke Umrhumo: T yena iarhente ke, ikhomishini, wahlawula yi-hiring umntu, ngaphandle kwe- lokuthenga kwexabiso.
Buyers ingaba highly emiselwe hire iarhente ngenxa ugqityo ye-negotiation kwaye ukuthenga nkqubo.
Iarhente ke intlawulo yi-ngokuqhelekileyo iqukwa impahla khangela, ubunini kwaye ilungelo sebenzisa khangela, closure amalungiselelo kwaye kolawulo zokugqibela ipropati unikezelo. Notary imirhumo: Notary imirhumo zizodwa. Nangona kunjalo, kubalulekile rhoqo elicetyiswayo ukusukela kubalulekile no ukuthenga isihloko-inshorensi.
Yesiqhelo ithuba ukubhaliswa yi-jikelele imihla
Notary imirhumo umqolo ukusuka ku.
kuba expensive iimpahla ukuya ku. Ubhaliso imirhumo: Ziyathengiswa-thenga sivumelwano kufuneka ebhalisiweyo kunye Urhulumente Kumbhexeshi kuba Ipropati Amalungelo kunye Notyalomali.
Amaxesha amaninzi ubhaliso kuthatha malunga ngenyanga kwaye iindleko RUB, expedited ubhaliso iyafumaneka ukuze RUB, kwaye iqalisa kuphela iiveki.
Intlawulo yi-ihlawulwe ngamnye ngeniso, intengiselwano babe kufuneka eziliqela amangeno). Ukuba ipropati ukuthengwa ngu-a ngezakhono kunye ilizwe, ezahlukeneyo imali ufumana imali kuba ubhaliso ilizwe. Ubhaliso imirhumo kanjalo ziquka iziqinisekiso kwaye extracts. VAT: Value Added Tax- ngu levied kwi ukuthenga ixabiso kwezakhiwo (premises). Ukuthengisa ilizwe plots ngu-VAT-exempt.
Get ngenyanga ezifanelekileyo uhlalutyo ngosuku lwehlabathi impahla kwamanye amazwe kwaye exclusive, ebutsheni ukufikelela ngamathuba otyalo-mali akhululwe ilungelo lakho ibhokisi yangaphakathi.
Ukufumana ezifanelekileyo analyses kunye nempahla inikezela ukususela ihlabathi ke zokuhlala kwiimarike ngqo yakho ibhokisi yangaphakathi.
Trump remplace Maison Blanche avocat de la Russie, la sonde de l'agence Reuters